UMkhandlu wase Mhlathuze nezinhlelo zokuthuthukisa abantu abasha – Sivubela intuthuko Newspaper
UMkhandlu wase Mhlathuze nezinhlelo zokuthuthukisa abantu abasha
By admin	 Last updated Aug 19, 2019 208
Kuqhilike izihlathi kosomabhizinisi abasafufusa abahlomule ohlelweni lo mkhandlu lokuthuthukisa intsha.
Imeya yoMkhandlu waseMhlathuze u Cllr Mduduzi Mhlongo izibophezele ekuthuthukiseni intsha eyakhele izindawo ezingaphansi koMkandlu uMhlathuze. Ekhuluma emcimbini obusenkundleni yezemidlalo eNseleni ngomhlaka ngempelasonto uCllr Mhlongo uthe bazimisele bewuMkhandlu ukuletha ushintsho ezimpilweni zentsha eyakhele uMhlathuze.
“Sihlele ukuthi sihlanganyele lapha endaweni yase Nseleni ukuzobungaza amaqhawe anikela izimpilo zawo ukulwela intuthuko yezemfundo yomuntu omusha. Sikhulume nabantu abasha mayelana nokubaluleka kokuthanda ezemfundo, kubalulekile ukuthi sikuthinte ukubaluleka kwezemfundo ngoba amaqhawe ango 1976 ayelwela ukuthi izinga lemfundo yomuntu omnyama lithuthukiswe. Siyafisa ukuletha amathuba alethwe intando yeningi kubantu abasha, siyabagqugquzela ukuba bawabambe ngezandla zombili ukuze azithuthukise sakhe isizwe esiphumelelayo,”kusho uMhlongo.
UMhlongo uthe bazibophezele bengu Mkhandlu ukungagcini ngemigubho yosuku lwentsha kodwa bahlele ukuthuthukisa intsha kwezemfundo kanye nasemkhakheni wezamabhizinisi.
“Kubalulekile ukuthi singagcini nje ngokuletha imibungazo singashiyi lutho oluzokwenza izimpilo zabantu zithuthuke ziye phambili, siyazigqaja ngokuthi kunabantu abahlomule ohlelweni lokuthuthukiswa kwamabhizinisi entsha ngohlelo lwe NYDA (National Youth Development Agency), kukhona ababili abahlomule ngo R50 000 ngamunye. Omunye usemkhakheni we Visual Arts kanti omunye usemkhakheni we Catering. Abanye bahlomule ngezinsiza kusebenza ezifana nemishini yokugunda utshani kanye neyokuthunga,” kuchaza uMhlongo.
Iza eKZN inkomfa yezamanzi
kugqabuka igoda phakathi kaNtshumayelo neBaroka FC
Intsha yaKwaDukuza iyoqeqeshelwa ukwenza ama-Website nama-App
UMasipala ulekelela intsha ngezincwadi zokushayela
UMASIPALA UHALALISELA ABAHLOMULE NGAMALAYISENSI OKUSHAYELA